'नेपालमा राजनीतिक पार्टी नै छैनन्, दलालहरु मात्र छन्' | Citizen Post News
मोहन चापागाई, राजनीतिक अगुवाका रुपमा चिनिनुहुन्छ । कुनै दल विशेषभन्दा पनि आफुलाई नेपाली हुँ भनेर चिनाउन रुचाउने चापागाई वैचारिकरुपमा म कुनै पनि वाद वा विचारहरु मान्दिन भन्नुहुन्छ । माक्र्सवाद भनेको केहिपनि नभएर एउटा धर्म जस्तै दर्शन हो भन्ने चापागाई केवल नेपालवादको समर्थन गर्नुहुन्छ । ‘नेपालवाद’ नामक पुस्तक नै लेख्नुभएका चापागाई आफुलाई एक सरल नेपाली भनेर चिनाउनुहुन्छ । आफ्नै स्वतन्त्र विचारधारामा अडिग रहेका चापागाईले लामो समयदेखि विभिन्न कालखण्डको नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउनुहुन्छ । नेपालमा घटेका प्रायः राजनीतिक घटनाक्रमको साक्षी रहनुभएका चापागाई वर्तमान परिस्थितिलाई पनि चनाखोपूर्वक हेरिरहनुभएको छ । नेपाली राजनीतिक परिवर्तनका महत्वपूर्ण पात्र भएर पनि हाल छायाँमा रहनुभएका चापगाईसँग नेपाली राजनीतिको विगत, वर्तमा र भविष्यबारे गरेको कुराकानीः
तपाई एकजमानामा जल्दोबल्दो राजनीतिज्ञ एवं लेखक हुनुहुन्थ्यो, अहिले किन हराउनुभयो ?
म हराएको छैन । कोही पनि मानिस जन्मिसकेपछि हराउँदैन । म पन्चायतकालमा पन्चायत विरोधी थिए । निर्वासनमा बनारस बसे । मैले मेरो जीवनको लामो अध्ययन र अनुसन्धानबाट माक्र्सवाद भनेको एउटा दर्शन हो तर, यो शासन प्रणाली होइन भन्ने ठम्याए । पछि बहुदल आएपछि मैले आफ्नो विचार मिल्ने पात्र खोज्दै हिड्दा पुष्पलालसँग सहयात्रा र सहआन्दोलन गरे । उहाँसँग पनि विस्तारै बैचारिक रुपमा मतभेद हुनथालेपछि आफ्नो विचारको सतह मिल्ने गिरिजाबाबु भेटे । पछि उहाँ पनि कम्युनिष्टसँग मिल्नुभयो । सहयात्रीहरुबाट उचित साथ नमिलेपछि एक्लाएक्लै आफ्नो संघर्षको बाटो हिँडिरहेको छु । त्यसैले म हराएको छैन् ।
तपाई पहिला पन्चायत विरोधी हुनुभयो, कहिले कम्युनिष्ट बनेर पुष्पलालहरुसँग मिल्नुभयो, पछि फेरी काँग्रेस भएर गिरिजाबाबुसँग मिल्नुभयो, काँग्रेसबाट फेरी राजावादी हुनुभयो । अहिले चाहिं तपाई कुन पार्टीमा आवद्ध हुनुहुन्छ ?
म अहिले कुनै पार्टीमा छैन । म स्वतन्त्र छु । म पहिला पनि माक्र्सवादको सिद्धान्त पूर्णरुपमा ठीक छैन, त्यो केवल गाइडलाइन्स हुनसक्छ तर, सबै कुरा माक्र्सले भनेजस्तो हुँदैन भनेर खण्डन गर्ने विचारधाराअनुसार नै पुष्पलालहरुसँग सहकार्य गरेको थिए । गिरिजाले कम्युनिष्टहरुलाइ माले, मन्डले र मसाले भनेर अछुत मान्नुहुन्थ्यो । त्यसैले मेरो माक्सवार्दको खण्डन गर्ने विचारधारा उहाँसँग मिल्न थालेपछि उहाँसँग सहकार्य गरेको थिए । जसरी विशेश्वरले आफ्नो जीवनकालमा कहिल्यै कम्युनिष्टसँग सहकार्य गरेनन त्यसैको अडिग विचारधाराबाट प्रभावित भएर म गिरिजाबाबुसँग सहकार्यमा थिए । तर, गिरिजाबाबु माओवादीसँग मिल्न दिल्ली पुगे । त्यसैले त्यहाँ पनि मेरो विचारधारा मिलेन । अहिले त नेपालमा काँग्रेस छैनन बरु जागिरे काँग्रेसीहरु मात्र छन् ।
तपाईले राजा वीरेन्द्रको आर्शीवाद पाएपछि राजावादी हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
मैले पहिल्यै भनिसके मलाई कुनै बाद वा बादी मन पर्दैन त्यसैले म राजावादी हो भनेर कसैले भन्छन भने भनिरहुन । मलाई कसैको आरोपले प्रभाव पार्दैन । यद्यपि, मैले नेपालको सामाजिक व्यवस्थाको हिसावले राजतन्त्र नमासौं भनेर भनेको थिए । मेरो जीवनकालमा राजा वीरेन्द्रसँग जम्मा एकपटक भेट भएको छ । उहाँ राम्रो हुनुहुन्थ्यो, म राजाहरुको आलोचना गर्थे र फेरि पनि राजा बीरेन्द्रले मलाई मन पराउनुहुन्थ्यो रे । राजा बीरेन्द्रको अन्त्यपछि ज्ञानेन्द्रसँग मेरो विचार मिलेन । अहिले अरुले ‘राजा आउ देश बचाउ’ भनिरहेका छन तर, ‘जनता आउ देश बचाउ’ भनेर बोल्ने मान्छे म एक्लो छु । तर, राजाहरुले एकीकरण गरेर बनाएको देश नेपालमा राजव्यवस्था चै नमासम तर, अरु कार्यप्रणलीहरुमा सुधार गरम भन्ने मेरो राय थियो र अझै पनि छ । साथै, शुरु देखिनै मेरो विचारधारा नेपालमा संघीय प्रणाली फिट हुँदैन भन्ने थियो । अहिले नेपालमा एउटा पनि पार्टी छैन सिर्फ राजनीतिको नाममा व्यापारीहरु मात्र छन्, दलालीहरु मात्र छन्, घुसखोरीहरु मात्र छन् ।
तपाईले जो-जोसँग जुन-जुन पार्टीमा सहकार्य गर्नुभयो तिनीहरुले तपाईलाई प्रयोग गरेको मात्र देखियो ? के भन्नुहुन्छ ?
होईन होइन । म यस्तो स्वतन्त्र मान्छेलाई कसैले प्रयोग गर्नै सक्दैनन् । मलाई प्रयोग गर्न प्रयास गरेका थिए सकेनन् । बरु मेरो आफ्नो विचारधारालाई प्रवाह गर्न मैले चाहि उनीहरुलाई थोरबहुत प्रयोग गरे हुँला । अनि यिनिहरुले मलाई राजावादी भन्न मिल्छ ? बरु मदन भण्डारी राजावादी थिए, उनले भनेका थिए-‘श्रीपेच खोलेर आए म राजालाई चुनावमा हराउँछु’ भनेर । उनी त्यत्रो राजनीतिज्ञलाई पनि कस्तो थाहा नभएको कि राजा भनेको व्यक्ति हैन व्यवस्था हो ।
मदन भण्डारीको हत्या थियो कि दुर्घटना, तपाईलाई केही थाहा छ कि ?
त्यो त मैले कसरी भनौ । मदन भण्डारीको दुर्घटनामा मृत्युपछि मदनकै नाम बेचेर नेपालका कम्यूनिष्टहरु कयौं पटक, बार बार, राज गरिरहेका छन् । देशको शासनसत्तामा हालीमुहाली उनीहरुले नै गरिरहेका छन । तर खै त पत्ता मदनलाइ कसले मार्यो भनेर पत्ता लगाय त ? यी सब ठगहरु हुन्, भ्रष्टहरु हुन्, धोकेवाजहरु हुन । यिनीहरुले मदनको हत्यारा पत्ता लगाउन सकेनन् । आफैले बाहेक अरु कसैले हत्या गरेको हुन्थ्यो भने त कम्युनिष्टहरुकै रजगज, पावर र पुँजी भएको बेलामा को हो त्यो हत्यारा पत्ता लगाउन सक्नुपथ्र्यो नि ? मुख्य शंकालाग्दो कुरा यहि छ ।
त्यसो भए अहिले नेपालमा कम्प्यूनिष्ट छैनन त ?
हो नेपालमा कम्युनिष्ट छैनन् । कम्युनिजम नामको विश्वप्रख्यात दर्शनको नाममा जागीर खाने खौवाहरु मात्र छन् । कम्युनिष्ट भनेको आन्दोलन हो । यहाँ त आन्दोलन हैन दबदवा छ । बरु नेपालका सो कल्ड कम्युनिष्टहरुलाई राजावादी भन्न मिल्छ । यिनीहरुको रहनसहन, खानपान, जीवनशैली, कार्यशैली, नेतृत्व सबै राजासँग ठ्याक्कै मिल्दो छ ।
के त्यसो भए नेपालमा काँग्रेसी मात्र छन् त अहिले ?
अहँ, काँग्रेस पनि छैन । काँग्रेस भनेको त एउटा संघर्ष अन्दोलन हो, विचारधारा हो । अहिले नेपालमा काँग्रेस छैनन् । उही कम्युनिष्ट जस्तै काँग्रेस विचारधाराको नाममा जागीर खाने खौवाहरु मात्र छन । काँग्रेस भन्ने चीज त उही दिनदेखि सकिएको हो नेपालमा जब गिरिजाले माओवादीसँग साँठगाँठ गरेर आफ्नो विचारधारालाई लात हानिदिए । विपीले कहिल्यै आफ्नो विचारधारालाई छाडेनन् तर, गिरीजाले भने काँग्रेसको हत्या गरे ।
यहाँलाई त हरेक गोप्य सूचनाहरु जानकारी हुन्छन भनिन्छ, राजा बीरेन्द्रको हत्या चाहिं कसले गरेको थियो ?
राजा बीरेन्द्रको हत्या नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो दुःखद घटना हो । यसका पछि ठूलो गोलघेरा छ । आफ्नै वरपरकालाई गोटी बनाएर परकाले सिध्याय राजा बीरेन्द्रलाई । यो विषयमा अर्को पटक कुरा गरौंला ।
अहिले नेपालको राजनीतिक कता जाँदै छ ?
नेपालको अहिलेको राजनीति दिशा भनेको दुर्घटनातर्फको दिशा हो । यस्तो राजनीतिले जनताको नीति निर्माण गर्न सक्दैन । जनताको सेवा गर्न सक्दैन । र, राजनीति भनेको खासमा विशुद्ध सेवा हो । मिनिस्टर भन्ने अंग्रेजी शब्दको अर्थ नै सेवा हो । तर यहाँ राजनीति भनेको व्यापार, व्यवसाय वा धन्दा भैरहेको छ । त्यसैले अहिलेको राजनीति केवल एउटा व्यापाारिक जमातहरुको भीड मात्र भैरहेको छ । उदाहरणको लागि पहिले गुन्द्रुक खाने नेताहरुको अहिलेको जीवनशैली, खानपान, गाडी, बंगला र उनीहरुको कमाई हेर्न सक्नुहुन्छ ।
तपाई अहिलेको संविधान मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न ?
अहिलेको संविधान मान्नु भनेको संघीय प्रणाली मान्नु हो । त्यसैले म मेरो जीवनको शुरुवाती दिनदेखि नै नेपाल जस्तो सानो सुन्दर देशालाई चिराचिरा पार्न जरुरी छैन, नेपाललाई फुटाएर संघीय बनाउन जरुरी छैन, नेपालमा संघीय प्रणाली फिट हुँदैन भन्ने गर्थे । मैले भनेअनुसार नै अहिले संघीय प्रणाली फेलिएर हुँदै गईरहेको छ । त्यसैले म अहिलेको संविधान मान्न सक्दिन । मैले त नेपालमा राजसंस्था भनेको एउटा प्रणाली मात्र हो यसलाई नमासौ भनेको थिए । नेपाल हिन्दुहरुको बाहुल्य देश हो त्यसैले हिन्दुराज्य नमासौ भनेको थिए । देशलाई टुक्राटुक्रा नपारौं भनेको थिए तर, केही पनि भएन । त्यसैले म यो संविधान के आधारले मानौं जबकि सम्पूर्ण नेपालीहरुले हिन्दुराज्य चाहिन्छ भन्दाभन्दै धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए । यी खौवाहरुले त देशको धर्म संस्कृति नै बेचेर खाए । आफ्नो धर्म त बेचेर खाए खाए अन्तमा कृश्चियन पादरीले खुवाएको होली वाइन खाए । त्यसैले यो संविधान मान्ने आधार नै छैन ।
के अब नेपाल हिन्दुराज्य बन्न सक्ला ? अब राजतन्त्र फर्किएला ?
अब यो कसैले फर्काएर फर्किदैन । नेपालमा पुनः यी व्यवस्था ल्याउन कुशल राजनीतिज्ञ चाहिन्छ । दुःखद कुरा यही हो कि अहिले नेपालमा एकजना पनि राजनीतिज्ञ छैन । सबैले राजनीति नामक व्यवसाय मात्र गरिरहेका छन । धर्म बचाउन र देश बचाउन त जनता जनार्दन दर्शन मनन् गर्ने राजनीतिज्ञ चाहिन्छ । व्यापारीहरुले त बेचेर खाने काम मात्र गर्न सक्छन ।
अहिलेसम्म जनवादी व्यक्तिको रुपमा रहनुभयो, अबका योजना के छन् तपाईका ?
मेरो चाहाना भनेको जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने शासन व्यवस्था नेपालमा निर्माण गर्ने थियो पहिले तर, मेरो जीवनको दुई दुभाग्य भनेको राजा बीरेन्द्र मारिनु र गिरिजाले माओवादीसँग साठगाँठ गर्नु हो । यी घटनासँगै मेरा सपनाहरु पनि ओइलाए । म कुनै पनि पार्टीमा लागिन म सदैव स्वतन्त्र थिए । त्यसैले अहिले पनि मेरो व्यक्तिगत आवाज भनेको ‘जनता आउ देश बचाउ’ हो ।
म अरु धेरै केही भन्न चाहान्न । तपाईहरु जस्तो संचारमाध्यमले आवाजलाई बुलन्द गराईदिएमा म एउटै प्रमुख कुरा भन्दछु । अहिले हाम्रो देश ठुलो संकटमा छ । संकटकालको भन्दापनि ठूलो संकटमा छ । त्यसैले ‘जनता आउ देश बचाउ’ भन्ने नै हो । नेपाल जस्तो देशमा संघीयता फिट हुँदैन, हिन्दु नै हिन्दुको बाहुल्यता भएको देशमा धर्म निरपेक्षता फिट हुँदैन, राजाहरुले नै बनाएको वा जन्माएको देशमा राजसंस्था हटाउनु हुँदैन । त्यसैले जनता जाग्नुहोस । तपाईहरुमाथि ठुलो अन्याय भइरहेको छ । तपाईहरुको न्यायको लागि अरु कसैले लडिदिदैनन । तपाईहरु आफैले आफ्नो देश र आफ्नो अस्मिता बचाउनु पर्ने छ ।